काम खोजिरहेको छु : नेम्वाङ
संविधानसभाको विघटनपछि त्यसका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ फूर्सदिला भएका छन् । उनको पार्टी एमालेमा पनि ठोस जिम्मेवारी पाइ नसकेको अवस्था आजभोलि नेम्वाङ के गर्दै छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारासंक्षेप : संविधानसभाको विघटनपछि त्यसका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ फूर्सदिला भएका छन् । उनले आफ्नो पार्टी एमालेमा पनि ठोस जिम्मेवारी पाइ नसकेको अवस्था आजभोलि के गर्दै छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सारासंक्षेप : संविधानसभा विघटनपछि दिन कसरी वित्दै छन् ? १४ पछि म संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख छैन । सभामुख भएको बेला पार्टीमा मैले निवेदन दिए, पार्टीले मलाई जुन तपाई पार्टी गतिविधि तथा कार्यक्रममा संलग्न नहुने भनी लेखेर दिनु भयो त्यो एकदम ठिक गर्नु भयो । तपाईलाई हाम्रो स्वीकृति छ, र हाम्रो सहमति छ भन्नु भयो । अब पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्छ । तपाईलाई पार्टीमा यो जिम्मेवारी दिँदै छौ, भनिसकेको अवस्था छैन् ?
म त्यो पर्खेर बसेको छु । पार्टी जुन जिम्मेवारी दिन्छ, म त्यो जिम्मेवारी लिएरअघि बढ्छु । सभामुख भएको बेला पार्टीका कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन्न भनेर निवेदन लेखेर दिनु भयो, अहिले सभामुख नभएको अवस्थामा काम पाउँ भनेर निवेदन दिनु भएको छैन ? निवेदन खेलेर दिएको छैन । तर उहाँहरुलाई मैखिक जानकारी छ । जिम्मेवार नेताहरु यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ । मधेस तथा जनजातिका विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ, तपाई पार्टीभित्रको विवादमा कहाँनेर जोडिनु भएको छ ? यसमा एउटा मेरो प्रष्ट विचार छ । एमाले जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले निश्चित रुपमा सकारात्मक रुपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ ।पार्टीभित्र यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सबैले छलफल गरौं, पार्टीलाई सशक्त र सवल बनाएरअघि बढौं । यो विषय सबैको साझा विषय हो, यसलाई समुचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेलौ । यसो गरियो भने पार्टी तथा देश सबैको हित हुन्छ । पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्छ भने पनि, भित्रि रुपमा तपाई पार्टीसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र असन्तुष्टहरुलाई केही ढाडस दिइरहनु भएको छ भनिन्छनी ? एकातिर तपाईले भनेको जस्तो होला । अर्कोतिर केही साथीहरुले आफ्नो भूमिका नै निभाएन, ठूला नेताको मतियार भयो भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ । यी सबैलाई हेर्दा मैले तटस्थता राम्रोसँग निभाएछु भन्ने लाग्छ । पार्टीमा पूर्ण रुपमा जोडिएपछि तपाईको तटस्थता भंग होलानी ? संविधानसभासँग जोडिएका विषयमा मेरो त्यही अनुसार मूख्य र मान्यतालाई मान्नु पर्छ । पार्टीको कुरा भएपछि पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता भएरअघि बढ्नु पर्छ र बढ्छु पनि । संविधानसँग, संघीयतासँग जोडिएका विषय बहसमा तपाई तटस्थता बस्नु भयो भने, तपाई एमालेको नेता भएको अर्थ रहँला ? दलभित्रका कुरामा त्यसैअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र म गर्छ । संविधानसभा विघटन भएको लामो समय भइसक्यो निकास निस्केको छैन, राष्टपतिले समेत बोलाएर समहति गर्न भनिसके, दलहरुलाई तपाईको सुझाव के हुन्छ ? मोर्चा बन्दी नगरौ । अविलम्व सहमति र सम्वाद गरौ । हामी जुन अप्ठेरो अवस्थामा छौ, त्यसको निकास भनेको एक पटक एउटा महत्वपूर्ण राजनैतिक निर्णय गर्नुपर्छ । Comments